I-ANC isabisa ngokunqamula ingqungquthela yayo yokubonisana | News24
I-ANC isabisa ngokunqamula ingqungquthela yayo yokubonisana
Johannesburg – I-African National Congress (ANC) izoyinqamula ingqungquthela yayo eyisipesheli yokubonisana ngaphandle uma ngabe izingqalabutho zayo zivumelana ngokuthi izoba yingxenye yengqungquthela yaleli qembu yenqubomgomo ngasekupheleni kwale nyanga, uNobhala Jikelele weqembu, uGwede Mantashe, usho kanjalo.
“Uma bengazamukeli izinsuku ezimbili sizozinqamula izinsuku ezimbili bese siqhubeka nengqungquthela yenqubomgomo,” uMantashe utshele iNews24 ngoLwesibili.
Omakadebona be-ANC bafuna leli qembu libambe ngokwehlukana ingqungquthela yenqubomgomo kanye nengqungquthela yokubonisana. Ingqungquthela yokubonisana kuhloswe ngayo ukubhunga ngezindlela zokuqeda ukulahlekelwa kwaleli qembu ngabalandeli.
Emhlanganweni i-ANC ebe nawo nalabo ababengabaholi be-ANC ngoMgqibelo, bavuselele izimfuno zabo, uMantashe usho kanjalo.
Iqeqebana lomakadebona bophiko lwe-ANC, uMkhonto we Sizwe (MK) ngoLwesibili lithe angeke lube yingxenye yale ngqungquthela yenqumbomgomo. Bakhala ngokuthi ukuhlanganiswa kwengqungquthela yokubonisana neyenqubomgomo kuzobe kuwukumosha isikhathi futhi noma ngabe yiziphi izinqumo ezithathayo (ingqungquthela) angeke zibe nasisindo.
UMantashe uthi umkhandlu womakadebona umenyiwe emhlanganweni ukuzoxoxa ngengqungquthela kodwa akekho ofikile.
“Baya esithangamini sabezindaba ukumemezela into abangayixoxanga nathi,” kusho uMantashe ezwakala ukuthi unengekile.
Uthi abaholi beqembu bazohlangana nalabo ababengabaholi be-ANC ngoMgqibelo, wathi uma beqhubeka (omakadebona) nokuthi bafuna lezi zingqungquthela zihlukaniswe i-ANC izovele iyinqamule ingqungquthela yokubonisana, bese iqhubeka nengqungquthela yenqubomgomo.